XtraDeb: toerana fitahirizana PPA tena tsara an'ny rindranasa sy lalao ho an'ny Ubuntu | Avy amin'ny Linux
XtraDeb: fitehirizana fampiharana sy lalao PPA tena tsara ho an'ny Ubuntu
Na isika izany mpampiasa amin'ny kinova sasany an'ny Ubuntu, na ny sasany amin'ireo Distros nalaina ho mint na mifanentana toa Debian o MX, na hafa GNU / Linux Distro, ny zava-drehetra Linuxero matetika no tianao ny Repository zanatany ento ny kinova farany misy an'ny maro fampiharana sy lalao. Saingy, tsy izany no izy amin'ny ankamaroan'ny tranga, ary matetika no manararaotra izany Repository ivelany, toy ny, XtraDeb.
XtraDeb dia vao noforonina Repository PPA ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives na mifanentana, izay vao manomboka mitombo, manaparitaka ary manolotra fampiharana sy lalao tena tsara sy ankehitriny.
Na rindranasa na lalao izy ireo dia asao izy ireo ary ampiasao amin'ny kinova farany misy azy a amin'ny alàlan'ny a fametrahana fantsona tokana, dia tena ilaina ho an'ny olona betsaka indrindra hahalala sy hampiasa azy ireo ary ho an'ny ataovy hita maso, manampy ary miparitaka ny asan'ireo mpamolavola azy. Indrindra rehefa Games lazaina izy io, satria, a faritra lehibe izay tokony hivoarantsika foana Linux.
Ho an'ny tranga manokana amin'ny lalao, talohan'ny nanisana azy indrindra, amin'ny tranga Ubuntu, nalaina ary mifanarakaamin'ny PlayDeb, fa araka ny fantatsika rehetra, ilay havoana iray ihany taona maro lasa izay, araka ny hitanao amin'ny fanontana mifandraika amin'ity lohahevitra ity.
Veloma any GetDeb sy PlayDeb ... farafaharatsiny izao
Na izany aza, manana ny fomba kilasika mampiasa ny mpitantana fonosana afaka manao ny GNU / Distros Linux una Distro Gamer. Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratray etsy ambany:
1 XtraDeb: tahiry PPA misy lalao sy fampiharana havaozina
1.1 Inona ny XtraDeb?
1.2 Ahoana ny fametrahana XtraDeb?
1.2.1 Ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
1.2.2 Momba an'i Debian sy ny derivatives
XtraDeb: tahiry PPA misy lalao sy fampiharana havaozina
Inona ny XtraDeb?
Araka ny efa nolazainay teo aloha, XtraDeb dia a Repository PPA ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives na mifanentana, izay vao manomboka mitombo, manaparitaka ary manolotra fampiharana sy lalao tena tsara sy ankehitriny. Na izany aza, eo amin'ny tranokalanao tranokala ofisialy ao amin'ny LaunchPad, hoy ity manaraka ity momba azy:
"Ny tanjon'ity tetik'asa ity dia ny manome fonosana rindrambaiko fanampiny (sy fanavaozana kely) ho an'ny kinova Ubuntu ankehitriny raha vantany vao misy izy ireo. XtraDeb dia fandraisana andraikitra tsy ofisialy izay mikendry ny hanome ireo fonosana rindrambaiko farany ho an'ny kinova Ubuntu ankehitriny. Ny repositories XtraDeb dia manitatra ny toeram-pivarotana ofisialy, manome fonosana fanampiny ary, amin'ny tranga sasany, ny kinova farany misy an'ireo."
Mpamorona anao, Jhonny Oliveira, manangona a fanangonana fampiharana sy lalao tena tsara ao amin'ny trano fitehirizan-dry zareo, izay mampatsiahy ny maro amintsika, ilay nanjavona PlayDeb. Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny sehatry ny Games, hoy ity trano fitahirizana ity: lisitry ny lalao, izay hitombo tokoa rehefa mandeha ny fotoana:
Ary eo amin'ny sehatry ny fampiharana dia manolotra ireto manaraka ireto lisitry ny fampiharana:
Ahoana ny fametrahana XtraDeb?
Ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Momba an'i Debian sy ny derivatives
Mamorona rakitra fitahirizana ho an'ny XtraDeb
Ampidiro ireto atiny manaraka ireto (loharano lozisialy):
Manampia lakile fitahirizana
Vaovao farany ny lisitry ny fonosana
Raha vantany vao vita ireo dingana rehetra ireo dia afaka mametraka ireo Fampiharana sy lalao XtraDeb, raha raisina izany, rehefa vita amin'ny a Debian Distro sy ny derivatives, azo antoka fa maro amin'ireo rindranasa no ho sarotra apetraka, noho ny olana amin'ny fiankinan-doha. Raha ho ahy manokana, ny Urban Terror 4.3.4 lalao momba ahy GNU / Linux Distro, tsy nanome olana miankina amin'ny fiankinan-doha izany.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «XtraDeb», PPA Repository ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives na mifanentana, izay vao manomboka mitombo, manaparitaka ary manolotra fampiharana sy lalao tena tsara sy ankehitriny; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » XtraDeb: fitehirizana fampiharana sy lalao PPA tena tsara ho an'ny Ubuntu
Jose Juan dia hoy izy:
Youtube-dl dia tsy nohavaozina tao amin'ny «ppa: xtradeb / apps» repo, satria izy io dia tsimbadika 2020.11.29-1 (ho an'ny anio 08/12/2020, youtube-dl dia ao amin'ny kinova 2020.12.07, izay nohavaozina talohan'izay); olana io satria ny youtube-dl dia tsy maintsy manaraka vaovao hatrany.
Megamario milay !!
Valio i José juan
Miarahaba anao, José Juan. Misaotra tamin'ny hevitrao. Manantena aho fa ny mpikirakira anao dia hijery sy hanavao ny fampiharana anao amin'ny fahazotoana tsara.
LibreOffice Office Suite: kely fotsiny amin'ny zavatra rehetra hianaranao bebe kokoa momba azy